ओली पक्षीय नेताको दाबी- अन्तिममा जाने निर्वाचनमै हो [अन्तर्वार्ता] | नेपालन्युज
यो अस्थिरताको राजनीति कहिलेसम्म हो ?
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला एक खालको तरंग पैदा भएको छ। यो समय हामी सबैका लागि खुसीको समय होइन। तैपनि सात दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी र पाँच दक भन्दा लामो यही पार्टीमा जीवन बिताएका नेतृत्वगण, नेपालमा कम्युनिट आन्दोलनलाई जनताले दिएको साथ सहयोग र आम कार्यकर्ताको त्याग तपस्या र बलिदानप्रतिको अन्याय हो। हाम्रा नेतृत्वहरुले यो स्थिति नआइकनै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो।
जनताले गरको विश्वासलाई कायम राख्न सक्नु भएन नि?
नेपाली जनताले जुन उद्देश्य र विश्वासका साथ यो पार्टीलाई अभिमत जाहेर गर्‍यो। त्यो अभिमत जाहेर गरको विषयबस्तुमाथि पार्टी र सरकारले जे गतिविधीहरु गरिरहेको छ, आम नेपाली जनताको हित र पक्षमा राष्ट्र, राष्ट्रियतको पक्षमा, स्वाधीनता र अखण्डताको पक्षमा कुनै खोट लगाउने ठाउँ छैन। तर नेतृत्व पंक्तिमा जुंगाको लडाइँ हुनु दुःखद कुरा हो। प्रतिनिधिसभाको विघटन अनि अदालतको जुन निर्णयले यो स्थिति आएको छ। हामी पहिले जो-जो र जहाँ-जहाँ थियौं त्यही बसेर वा अरु थप एकाकार भएर जानसक्ने स्थिति छ/छैन भनि बौद्धिक बहस चल्नु आवश्यक छ।
यो पार्टी भनेको समुन्द्रजस्तै हो। कसैले दुई-चार घैला उघाएर लैजाँदैमा न त्यसको सतह घट्छ, न बेग रोकिन्छ। ऊ आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। तर हामी सूर्य चिन्ह जहाँ छ त्या बस्ने हो। को नेता कता जान्छ, त्योसगँ हाम्रो सम्बन्ध छैन। उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
महिनावारीको समयमा नुहाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्ताे हुन सक्छ है !
कहाँ के कमजोरी भयो? बौद्धिकता, नेतृत्व वा नेतृत्व गर्ने क्षमतामा? वा, कसैबाट परिचालित हो?
कहीँ कसैबाट परिचालित पनि होलान्। तर इतिहास बोकेको नेतृत्वले कैसैले परिचालित गर्दैमा आफ्नो अस्तित्व, हैसियत नै त गुमाउनु नपर्ने हो। कहीँ कसैको पछि लागेको नै भए पनि सच्चिने प्रसस्त मार्गहरु छन्। पार्टीको वैधानिक, औपचारिक बैठकमा सहभागी हुनुपर्‍यो। चित्त नबुझेका कुराहरु छलफल गरेर टुंङ्गाउनुपर्‍यो। तर यो एकअर्काप्रति छरपष्ट गाली गर्दै हिप्पीजस्तो स्वभाव देखाउनु भएन। आफैँले निर्वाचित गरेको अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा नआउने, आफैँले बनाएको सरकार प्रमुखले बलाएको ठाउँमा नजाने र आफ्नै सरकारले गरेका राम्रो कामहरुको जनतामा सुसूचित नगराउने नेता के नेता। हामी जे गर्दैछौं, जुन ठाउँमा छौं त्यसको सही सूचना जनतासम्म सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने निर्णयहरु ठीक ठाउँमा ठीक समयमा गर्दैछौं भन्ने अुनभूति दिलाउनुपर्छ। पदको पछि दौडिनुभन्दा पाएको जिम्मेवारीलाई सही तरिकाले निभाउन जान्नुपर्छ। आफ्ना आफन्तलाई कहाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने सोच्ने गरेको तर आन्दोलनमा साथ सहयोग गर्ने कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न कुरा बिर्सिए। बहुमतले गरेका निर्णयलाई अवलम्बन गरिएन।
नेकपा एमाले फुटाउन खोजेको हो ?
कहाँ जन्छन्? हराउने चिलाउनेको फेदमा हुनेबाहेक अरु स्थिति देख्दिनँ म। पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई घनिभूतरुपमा अंगीकार गर्दै जनताको हित र पक्षमा तहगतरुपमा खटिरहने आम कार्यकर्ता र जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने निरास हुनु पर्दैन। यो पार्टी भनेको समुन्द्रजस्तै हो। कसैले दुई-चार घैला उघाएर लैजाँदैमा न त्यसको सतह घट्छ, न बेग रोकिन्छ। ऊ आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। तर हामी सूर्य चिन्ह जहाँ छ त्या बस्ने हो। को नेता कता जान्छ, त्योसगँ हाम्रो सम्बन्ध छैन। उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
माधव नेपाल समूहले आफ्ना नेताहरुलाई गोप्य भेला बोलाई अबको रणनीतिको विषयमा छलफल गरिरहेको छन्। के अध्यक्ष ओलीले माया नगरेर हो?
गलत, दिएको माया नबुझेको वा माया धेरै भएर पातिएका हुन्। भूमिगतकालमा वा पञ्चायतकालमा एउटा भटमाससमेत दुई फ्याक पारेर खाएर यत्रो जेल नेल भोगरे आएको नेताहरु एउटा सामान्य कुरामा आफूलाई मात्र अग्रभागमा राखेर हेर्न हो? देश र जनतालाई अग्रभागमा राखेर हेर्नुपर्छ। समस्या सल्भ गर्नुपर्छ।
सुरेन्द्र पाण्डेले दिए एमाले विभाजनको संकेत, पत्रकार सम्मेलनमै यस्तो भने
त्यस्तो नेता कोही देख्नु हुन्छ नेपालमा?
केपी ओलीको नेतृत्वले यसलाई समधान गर्न सक्छ। त्यही देखेर हामी त्यहाँ छौं। हामी कुनै पदमा छैनौं तर नीति, सिद्धान्त र विचारको पक्षधर भएर इमान्दारपूर्वक लागि रहेका छौं। आस्था, निष्ठा र विश्वासको कुरा हो निरन्तर लागि रहन्छौं। पद प्रतिष्ठाको लोभ लालचमा हामी लाग्दैनौं। किन भने सही विचार, सही नीति र कार्यक्रम केपी ओलीको सरकारमै छ।
पद प्रतिष्ठाको लोभ लालचा नभएर हो सरकारी जागिर छाडेर पार्टीमा लागेर जनताको सेवा गर्न थाल्नु भएको?
ऐनलाई नियमले निषेध गर्ने, नियमलाई निर्देशिकले निषेध गर्ने, निर्देशिकालाई सर्कुलरले काट्ने, सर्कुलरलाई टेलिफोनले काट्ने प्रवृति हुँदा साँच्चै न्याय पाउनुपर्ने मान्छेहरुले न्याय नपाएपछि अब सेवाको विषय यहाँ बसेर गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर म यता लागे। यही पार्टीले मलाई नाम, मान दियो। म अहिले शेर्पा समुदायको सबैभन्दा ठूलो पद पाउने मध्येमा पर्छु। योभन्दा अरु के चाहियो र?
सुन्दर नङ बनाउन चाहनु हुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपायहरू...
अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिरहँदा यता माधव नेपाल पक्षले समानन्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ। अबको निकास के होला?
पार्टीलाई माया गर्नेप्रति सधैं जीवन्त साथ सहयोग गर्ने मान्छेहरुको ताँती नेकपा एमाले ओली समूहमा छ। उहाँहरु आत्मसन्तुष्टिका लागि कमिटी गठन गर्नु होला। अध्यक्ष बनाउनु होला वा विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी लिनुहोला। उहाँले जाने ठाउँ कहाँ हो? यही धरातलमा होइन? यही भूगोगमा होइन? तैपनि हाम्रो पार्टी उद्धार पार्टी हो। त्यसैले आउन चाहनेलाई स्वागत गर्छौं।
नेपाल समूहले विभिन्न माग राख्नुभएको छ नि?
उहाँ जतिको पार्टीमा उचाइ प्राप्त गर्ने मान्छेले झिना मसिनो कुरामा अल्झिने होइन। जे कुरा हो त्यही समधान गरेर जाने हो। खुला चौर, ब्याङ्केटमा बसेर त्यस्तो निर्णय गर्ने होइन।
के राजनीतिमा जे कुरा पिन क्षम्य हुन्छ?
समय हामीले सोचेजस्तो नहुन सक्छ। दुनियाँलाई मार्क्सवाद, विश्व कम्युनिस्टको इतिहास र दृष्टिकोण पढाउने नेताहरु, जबज पढाउने नेताहरु धैर्यता, सम्यम्ता, लचकता, सहनशिलता, नम्रता भन्ने कुरा पनि शब्दकोषमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। फेस भ्यालुको र्माकेटिङ नगर्नुस्। कम्युनिष्ट भएर बस्नुस्। सत् कर्म र्गनुस्, सत् मार्गमा हिड्नुस् उहाँहरुलाई कस्ले औंला ठडाउँदैन। ५० वर्षको राजनितिक इतिहास बोक्दा पनि अझै आफुलाई अनुसाशित र मर्यादित नबनाउने? आम नेपाली जनता र आम कार्यकर्ताहरु सूर्य चिन्हसहितको नेकपा एमालेमा उभिन र गल्त तत्वहरुलाई निर्वाचनमार्फत् साइड लगाउन आग्रह गर्दछु।
पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यस्ता छन् घरेलु उपायहरु...
एमालेमा वामदेव गौतमको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
उहाँ शीर्ष नेता हो। मैले मूल्यांकन, टिप्पणी गर्नुपर्ने केही छैन। तर उहाँ जतिको मान्छेले यही बसेर पहल गर्नु पर्थ्यो, छुट्टै दस्ता नबनाएको भए हुन्थ्यो।
कम्युनिस्ट एक हुने सम्भावना देख्नु हुन्छ?
असम्भव भन्ने केही छैन। तर सबैले आफ्नो गल्तीलाई आत्मआलोचना गर्नुपर्‍यो। पार्टीको भविष्य सोच्नु पर्‍यो। आत्मकेन्द्रीत कुरा गर्नु भएन। जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा सोच्नु पर्‍यो। एक हुने सम्भावना प्रसस्त छन्।
जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिएजस्तो लाग्दैन?
हजारौं पुल पुलेसा, तुइन, सडक विस्तार, घरबारविहीन परिवारलाई घरको व्यवस्था गरियो, फुसको छाना हटाइयो, स्वास्थ्य बिमा लागु गरियो, समग्रमा भन्नु पर्दा यो ३ वर्षमा जनतामा राम्रोसगँ परिर्वतन भएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरुको असहयोगका कारण यसको गतिमा असर परेको हो। हाम्रो सरकारले गरेका कामहरु प्रचार गरिएन।
सरकार बाहिरका दलहरु नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने दाउँमा छन्। ओली नेतृत्वको पार्टी पनि आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउने लाइनमा छन्? अबको समीकरण कस्तो देख्नु हुन्छ?
६४ प्रतिशत संसदमा शक्ति भएको शक्ति यो खालको देउसी खेल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा हामी जनता, कार्यकर्ताको दोष छैन। नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो। सत्तामा रहेर पनि विपक्षजस्तो व्यवहार देखाउने उहाँहरुले सोच्नुपर्ने हो। अरुले पनि सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएन। अन्तिममा जाने निर्वाचन नै हो।
किन हुन्छ एलर्जी ? यस्ता छन् एलर्जीबाट बच्ने उपाय !